Fanambarana FFKM : MBOLA HITOHY NY FIHAONAN’NY EFATONTA – MyDago.com aime Madagascar
Nanao tatitra androany ny FFKM fa mbola hitohy ny fampihaonana ny filoha telo mirahalahy sy I Andry Rajoelina, niara-nanaiky ny rehetra hoy ny fanambaarana nataon’i FFKM io maraina io fa ilaina izany fihaonana izany ary hatao eto Madagasikara ny dinika, niara-niaky ny rehetra fa zava-dehibe ny fampihavanana sy ny fifamelana, tsy tomombana izany noho ny tsy naha teto an’ny filoha Ravalomanana, samy handray ny andraikiny tandrify azy daholo ny rehetra hampodiana ny filoha Ravalomanana hahafahany mamonjy io fihaonana io hoy hatrany Mgr Odon Razanakolona .
Taorian’ny savorovoro omaly teny Ivato nandritra ny fampihaonana nokarakarain’ny FFKM ireo filoha teo aloha ny Amiraly Ratsiraka, ny Pr Zafy Albert ary Rajoelina dia nanatanteraka fivoriana maika ny movansy Ravalomanana tetsy Anosy. Tsy nisy nipika ny dinika tamin’izany fa ny azo antoka dia ny fijerena ny paikady vaovao entin’ny movansy Ravalomanana hiatrika ny tolona. Raha heverenana ny zava-nitranga teny Ivato dia fihaonan’ny telo tonta no nisy izay notarihan’ny FFKM. Tsy tonga nanatrika izany ny filoha Ravalomanana Marc. Izy izay efa nahazo ny tapakila handehanana amin’ny fiaramanidina hiala tao Afrika Atsimo hihazo an’I Madagasikara.Tamin’ny ora farany anefa dia nirotsaka ny “Notam” avy amin’ny fat, izay milaza fa tsy mahazo miondrana ao anatin’ny fiaramanidina tokony handehanany. Noho ny tahotra ny filoha Ravalomanana Marc no antony nanaovana izany. Voaporofo omaly fa Rajoelina sy ny mpiara misôsy amin’ny sakana amin’ny fikatsaham-bahaolana eto amin’ny firenena. Ny miaramila izay nandrangaranga fitaovam-piadiana teny Ivato nilaza fa fanazaran-tena hono no ataon’izy ireo. Ny tena marina anefa dia ny fahatahorana ny filoha Ravalomanana Marc no nanaovana izany. Midika izany fa miditra lalina amin’ny raharaha-politika ny miaramila. Ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy anefa dia manjaka tanteraka. Remenabila izay nandravarava tany amin’iny faritra Atsimon’I Nosy iny dia tsy hita izay fanazaran-tena nataon’ny miaramila, ary hatramin’izao dia tsy nahita-bokany izany. Mampihen-danja ny foloalindahy manoloana ny vahoaka izao fihetsika izao. Nandritra ny dimy taona izay dia tsy nanana finiavana hitady vahaolana ivoahana amin’ny krizy ny fitondran-dRajoelina. Ny Sadc ihany koa mbola tsy nisy vokany hatreto ny fanelanelanana izay nataon’izy ireo. Amin’izao fotoana izao ny FFKM dia miezaka mikatsaka vahaolana amin’ny alalan’ny fampihavanana sy ny fifamelana. Ireo filoha teo aloha ny Amiraly Ratsiraka, ny Pr Zafy Albert, ny filoha Ravalomanana Marc ary Rajoelina no hitan’izy ireo fa hamaha ny krizy politika niainan’ny firenena nandritra izay efataona mahery izay. Nandringa anefa ny fampihaonana teny Ivato satria tsy nanatrika izany ny filoha Ravalomanana Marc. Ny fahatongavany eto no tena vahaolana hivoahana amin’izao krizy izao.
Namoaka fanambarana androany ny FFKM fa mbola hitohy ny fampihaonana ny filoha telo mirahalahy sy I Andry Rajoelina, niara-nanaiky ny rehetra hoy ny fanambaarana nataon’i FFKM io maraina io fa ilaina izany fihaonana izany ary hatao eto Madagasikara, samy handray ny andraikiny tandrify azy daholo ny rehetra hampodiana ny filoha Ravalomanana hahafahany mamonjy io fihaonana io hoy hatrany Mgr Odon Razanakolona.
Andrasana araka izany ny daty hanaovana indray ny dinika manaraka.
Auteur Solo Razafy*Publié le 4 juillet 2013 4 juillet 2013 Catégories Politique
10 réflexions sur « Fanambarana FFKM : MBOLA HITOHY NY FIHAONAN’NY EFATONTA »
Ary sarin’iza io olona tsy mitàna Baiboly io ?
Tsy misy fihaonana an-tampony mandeha izany raha tsy eo ny filoha Marc Ravalomanana. Miomana isika rehetra hidina an-dalambe. Efa ho avy indray izao ny grevy fa mila,mbola,ampiana. Ho-grevy ny eny Ankatso , hi-grevy koa ny SEMPAMA sy ny PARAMÉD Samia manamafy ny greviny ny rehetra ka,atao maharay ity vola jolay ity indrindra ny 14 jolay.
MBOLA SADY MIVAVAKA IZY LESY A!!!
sady efa hainy tsianjery ilay baiboly fa aiza ary ialah izany????
aza maka » L » oah!!!dada mody no tanjona na mitana na tsy mitana Baikboly ilay iray tsy olana.
Iza avy aloha ity hoe: handray anjara @ fahatongavan’i dada , ny @ lafiny inona tsara fa tsy dia
mazava loatra Tompoko????? » samy handray andraikitra tandrify azy daholo ny rehetra ??? »
REHETRA IZA???ANDRAIKITRA INONA AVY OHATRA?????
Fa tena rava izany ny tsena tao???raha izay dia mety be kah!!!MANKASITRAKA e!!!aleo hazava
tsara ny resaka.Dia iza avy no nandray anjara t@’izany fivorian’ny Ankolafy dada tsy nahazo
natrehana izany hono????ny hanongotsongona ny maty mba tsy handevenana velona Tompoko.
koa miala tsiny fa somary saroteny kely e!
Ka ilay fitokonana raha vao mandeha ila dia tsy misy dikany fa lalaovin’i foza fotsiny e!!
tsy haiko hoe maninona no atao mitsitokotoko ohatra ny tain’alika ilay izy?????
aiza no hisy zavatra hanjary???
nefa toa manaiky ny soso_kevitry ny mpanongam-panjakana sy ny mpampiasa -mpanjanaka azy ireto ny FFKM fa tsy mijoro amin’ny tena heviny izay hampiavana ny Malagasy Rehetra..Tsy masaka tsara ny foto-kevitra dia no taingenan’ireto mpanongam-panjakana ,izay mihevitra fa hisy vokany izany fihaonana izany raha tsy hatao amin’ny fo madi tsy mamela toerana ho an’ny fo lentika sy feno lolom-po sy tsy fitiavana ary tsy arahin’ny fahamarinana !
dia niarantsika nahita fa tsy tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana fanokafana ilay fihaonana ny filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC satria norahonana ilay companie tompon’ny fiaramanidina hitondra azy aty Antanindrazana..Hoy ilay fandrahonana i madagasikara dia tsy miantoka ny olona entina na ny fiaramanidina amin’izay loza mety hitranga…Ny compagnie d’assurances anie no mpiantoka fa tsy ny Firenena
handray ilay fiaramanidina é § Io fiheverana fa tompon’andraikitra amin’ny sidina nyb firenena iray dia tsy mitombona raha tsy hoe miomana hanao ratsy ity Firenena ity ,koa tsy mpietraka izany eo amin’ny Aviation civile internationale ,satria ity firenena mandrahona dia maneho fa mpampihorohoro izy ary mitovy amin’ny terroriste..
Koa hoy aho hoe mantsy ny FFKM : » Tsy vitanareo samy irery iny famahana ny crise eto Madagasikara satria eto Magasikara ny hery manakana nyy famahana ny crise..Tafiditra ao anatin’ny savorivory diplaomatique ny crise eto Madagasikara satria
Iza no hanaiky izany intsony AMIN4IZAO FOTOAN4ANDRO IZAO ?
–Maro ireo Firenana matanjaka noho i frantsa no tsy manaiky izany fanitsakitsahana ny zon’ny Malagasy hizaka tena.., ka mifanditra amin’ny frantsay izy izy ireo ary mangataka ny hanaovana fifidianana malalaka sy démocratique ary mazava tsara mba hifianan’ny Malagasy izay olona fantany tsara fa hahefa ny Fitondrana no azo antoka fa hitantana tsara ny Firenena mba hampandroso ny toe-karena sy hanatsara ny fiainan’ny malagasy..
Ny Malagasy eo am-pifidianana no hanavaka ny voatsara sy ny tsiparifary ,koa aoka hilatsaka izay te-hilatsaka…
5 juillet 2013 à 5 h 57 min
Raha nampoizina ho may hono ny trano dia nafitdra aloha ny entana,
saingy tsy nampoiziny ny zavanisy koa mamela azy marina.
Izao tsy ny omby intsony no angalarin’i dahalo fa ny VEHIVAVY, mazava fa ho
fongorana taranaka ny GASY mba hanomezana vahana ny MPANJANAKA dia
FONGORANA NY VEHIVAVY TSY HAMELA TARANAKA , sady maharary no manome litoka fa ……..
Ny mampalahelo dia ny vehivavy karana, tsy avelan-dry zalahy tompony hiteraka metisy kely ! Ny vehivavy gasy koa moa raha vao mahita karàna sy mena sofina dia toy ny mahita Andriamanitra ! Eo ireo sahy manompo sy mivavaka amin’ny karàna !
Mbô kôzy ê !! MDR !!!
Précédent Article précédent : RAZAFY Robert Jean : « ennemi du peuple »
Suivant Article suivant : Manan-danja ny FFKM